Arch Linux wuxuu amraa Dhamaan Isticmaalayaashaada inay ogaadaan | Laga soo bilaabo Linux
In kasta oo aan inta badan isticmaalo konsol-ka, haddana waxaan qirayaa inaanan ku fiicnayn xifdinta amarrada, haddana waxaan guud ahaan u isticmaalaa "xaashida khiyaamada" halkaas oo aan ku qoro amarro kala duwan oo aan inta badan u baahanahay iyo xaaladaha qaarkood oo aanan xasuusnayn. Tani malaha maaha habka ugu wanaagsan ee lagu heli karo amarrada aan u baahan nahay, laakiin waa midka aan isticmaalo oo aniga ila shaqeynaya.
Hadda waxaan ku raaxeysanayaa Manjaro KDE (Waa maxay 'Arch Linux' ku saleysan distro), Waxay ila muuqatay mid xiiso ii leh inaan sameeyo isku soo ururinta amarrada inta badan loo isticmaalo Arch Linux iyo kuwa kale oo aan aad loo isticmaalin laakiin ay leeyihiin yutiilitiyaal xiiso leh.
Waxaa xusid mudan in habka ugu wanaagsan ee lagu ogaan karo amarrada Arch Linux uu yahay Wiki-ka distoorka laftiisa, halkaas oo ay ku sugan yihiin macluumaad aad u dhameystiran oo ku filan amar kasta. Isku-dubbariddani waa wax aan ka ahayn tilmaam deg-deg ah oo dhakhso leh, si loogu dardaarmo amar kasta (isticmaalkiisa, adeeggiisa, qaabeynta, iyo kuwo kale) waxaan si xoog leh ugula talinaynaa inaad tagto Arch Linux Wiki.
1 Pacman iyo Yaourt: waa 2 amar oo muhiim u ah Arch Linux
2 Amarada Aasaasiga ah ee Loo Adeegsaday Arch Linux
Pacman iyo Yaourt: waa 2 amar oo muhiim u ah Arch Linux
Pacman y Yori samee Arch Linux mid ka mid ah waxyaabaha ugu fiican ee maanta jira, iyaga oo loo marayo waxaan ku raaxeysan karnaa kumanaan xirmo iyo barnaamijyo loo heli karo in lagu rakibo amarradan. Si la mid ah, labada qalabba waxay u shaqeeyaan si isku mid ah sidaa darteed barashada sida loo isticmaalo waa mid aad u fudud.
Pacman waa Arch Linux maareeyaha xirmada asalka ah, dhanka kale Yori waa xirmo noo siineysa inaan marinno keydka bulshada AUR, halkaas oo aan ka heli karno mid ka mid ah liistada ugu weyn ee xirmooyinka la soo ururiyey ee maanta jira.
Amarada aasaasiga ah ee Pacman iyo Yaourt ee ah inay tahay inaan ogaano inay yihiin kuwa soo socda, waxaan ku kooxayn doonaa waxay samaynayaan, waad arki kartaa iskumid ahaanta amarrada, si la mid ah, waxay muujinayaan in pacman lagu fuliyo sudo iyo yaourt muhiim ma ahan.
sudo pacman -Syu // Cusboonaysii nidaamka yaourt -Syu // Cusboonaysii nidaamka yaourt -Syua // Cusboonaysii nidaamka marka lagu daro baakadaha AUR sudo pacman -Sy // Isku dubarid baakadaha xogta yaourt -Sy // Isku-dubbarid baakadaha ka imanaya database-ka sudo pacman -Syy // iswaafajinta xoog ee xirmooyinka baakadaha yaourt -Syy // Ku qasbo isku xirnaanta xirmooyinka baakidhka sudo pacman -Ss xirmo // Kuu ogolaanayaa inaad ka raadsato xirmo ku jirta keydadka yaourt -Ss xirmo // Kuu ogolaanayaa inaad ka raadsato xirmo bakhaarada sudo pacman -Yes xirmo // Hel macluumaad ku saabsan xirmo ku jira keydka yaourt -Haa xirmo // Faahfaahin ka hel xirmo ku jira keydadka sudo pacman -Qi xirmo // Muuji macluumaadka xirmo rakiban yaourt -Qi xirmo // Muuji macluumaadka xirmo la rakibay sudo pacman -S xirmo // Ku rakib oo / ama cusbooneysii xirmo yaourt -S xirmo // Ku rakib oo / ama cusbooneysii xirmo sudo pacman -R xirmo // Ka saar yaourt xirmo -R xirmo // Ka saar xirmo sudo pacman -U / dariiqa / loo maro / xirmada // Ku rakib yaourt xirmo maxalli ah -U / dariiqa / loo maro / xirmada // Ku rakib baakad maxalli ah sudo pacman -Scc // Nadiifi baakadka yaourt -Scc // Ka nadiifi kaydka baakadda sudo pacman -Rc xirmo // Ka tirtir xirmo iyo ku tiirsanaanteeda yaourt -Rc xirmo // Ka tirtir xirmo iyo ku tiirsanaantaheeda sudo pacman -Rnsc xirmo // Ka tirtir xirmo, ku tiirsanaanta iyo dejinta yaourt -Rnsc xirmo // Ka saar xirmo, ku tiirsanaanta iyo dejintooda sudo pacman -Qdt // Tus xirmooyinka agoonta yaourt -Qdt // Tus xirmooyinka agoonta
Amarada Aasaasiga ah ee Loo Adeegsaday Arch Linux
Horeba waagii hore halkan ayaa lagu daabacay Laga soo bilaabo Linux sawir aan ku dhisi karno cube, kaas oo noo oggolaaday inaan haysanno amarrada Arch Linux ee gacanta ku haya, sawirkani wuxuu sifiican u koobayaa inta kale ee amarrada ah ee aan dooneynay inaan kula wadaagno.
Waxaad ku kabi kartaa amarradan hagitaankii horay loo sameeyay, oo leh In kabadan 400 oo amarro ah GNU / Linux oo ay tahay inaad ogaato 😀
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » GNU / Linux » Amarro loogu talagalay Arch Linux in dhammaan isticmaaleyaashaadu ay ogaadaan
Aad u fiican. Waxay si sax ah iigu adeegtaa Arch-ka aan ku haysto netbook-kayga iyo qaybta aan ku haysto Parabola GNU / Linux-libre ee kombuyuutarka kumbuyuutarka.
macluumaadkaas oo dhan waxay ku yaalliin archlinux wikipedia. : /
Waxaan u soo qaadanayaa hadal ahaan wixii aan ku qoray maqaalka:
«Waxaa xusid mudan in habka ugu wanaagsan ee lagu ogaan karo amarrada Arch Linux ay tahay Wiki-ka distoorka laftiisa, halkaas oo ay ku sugan yihiin macluumaad aad u dhameystiran oo ku filan amar kasta. Isku soo uruurintaani waa wax aan ka aheyn tilmaam deg deg ah, si loo dardaarmo amar kasta (isticmaalkiisa, utility, syntax, iyo kuwo kale) waxaan si xoog leh kugula talineynaa inaad tagto Arch Linux Wiki. »
Yaa c xd
Waa inay sameeyaan qoraallo badan oo loo habeeyo ArchUsers si kastaba ha noqotee.
In badan oo kiiskeyga ah ka dib markii aan lumiyey tababarka: /
Waxaan haystaa fiidiyowyo dhowr ah kanaalkeyga YouTube-ka iyo balooggeygaba https://archlinuxlatinoamerica.wordpress.com ????
Waad ilaawday midka ugufiican ee cusboonaysiin
yaourt -Hadalkaaga-xaqiijin la'aan
Waxaan ku xasuusannaa Suya Isbaanishka si ka fudud Syua iyo amarka xuduudaha ma beddelayo, xaaladdan, natiijada
Marka la eego noconfirm, wixii laga cusbooneysiiyey AUR waa duub xaqiijin ah oo ay weydiisato, gaar ahaan haddii aad probón tahay, oo sidaas ayaad ku badbaadinaysaa.
Lizard, Waxaan ku lahaa internet aad u gaabis ah Arch muddo bilo ah laakiin arrinta Mageia si fiican ayey u shaqeysaa, kumaan galin qormada oo waxaan ka faa'iideysanayaa xaqiiqda ah inaan haysto buundo waxaan jeclaan lahaa inaan arko sida aan u hagaajin karo.
Ma wax sidan oo kale ah ayaa kugu dhacay?
Waan ka xumahay haddii tani jabiso xeerar kasta.
ku dheji sawirka kuub oo tayo sare leh
Waad salaaman tahay, iga raali noqo jaahilnimadayda qotada dheer, laakiin waxaan hayaa su'aal muhiim ah: Waxaan isticmaalayay Arch muddo 3 maalmood ah, waxaan haystaa labo boot oo leh nidaam kale oo qalliin. Waan jeclahay distoorka, laakiin waxaan la kulmaa dhibaato: Anigu ma rakibi karo yaourt (ugu horreyntii waxaan horeyba u haystay saldhig-devel rakibay), Waxaan wax ka beddelay pacman.conf anigoo isticmaalaya nano oo waxaan ku daray repo
Si kastaba ha noqotee waxaan helayaa qaladka: qaladka: kama helin faylka "archlinuxfr.db" repo.archlinux.fr: Hawlgalku aad ayuu u gaabiyaa. In ka yar 1 bytes / sec ayaa wareejiyay 10-kii ilbiriqsi ee ugu dambeeyay
khalad: wuu ku guuldareystay inuu cusbooneysiiyo archlinuxfr (soo dejiso qaladka maktabadda)
Waxaan isku dayay inaan ka tago SigLevel = Ikhtiyaariga ah ee Dhammaan, kaliya baaritaanka. Xawaaraha internetku waa kufilan yahay, meelaha kale ee wax lagu iibiyo wax dhibaato ah ima siinayaan, waan baari karaa ama kala soo bixi karaa xawaaraha aan qandaraaska ku qaatay.
Su'aashaydu waxay tahay haddii repo-kani wali jiro ama haddii aan si toos ah ugala soo baxo AUR oo aan soo ururiyo
Salaan kadib waan ka xumahay hadii su'aashu tahay mid doqonimo ah, laakiin waxaan ku celinayaa, waxaan kaliya la joogay Arch 3 maalmood.
Ka dib markaad ku darto keydka iyo keydinta, rakibi yaourt:
Mahadsanid, waxaan jeclaan lahaa in lagaa caawiyo su'aal, Arch, ama ilmahaaga Antergos oo ah kan aan isticmaalayo, ma lagama maarmaanbaa mise waa suurtagal in la cusbooneysiiyo darawalada lahaanshaha kaarka fiidiyowga sida loogu sameeyo meelaha kala duwan sida Ubuntu? Hadday suurogal tahay, ma i siin kartaa gacan sharraxaysa sida loo sameeyo?